Mabhuku anotengesa zvakanyanya kuSpain mukati memwedzi waKurume | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku anotengesa zvakanyanya muSpain mukati memwedzi waMarch
Nhasi tinokuunzira yekare kubva Zvazvino Zvinyorwa. Isu tinodzoka ku "kununura" zvinyorwa izvi zvawafarira zvakanyanya nezvazvo mabhuku anotengesa zvakanyanya mwedzi wega wega. Ino nguva tinouya nerondedzero ye mabhuku anotengesa zvakanyanya kuSpain mumwedzi waMarch, iyo yatakationekana nesu uye zvirokwazvo mamwe makopi mashoma akatengeswa kupfuura zvakajairwa, pakati payo pane mazita akanaka kwazvo.
Kana iwe uchida kuziva kuti aya mazita ndeapi uye uzive muchidimbu kuti ndeapi awo, ramba uchiverenga nesu.
Iwo mazita anotengesa zvakanyanya ...
"Kumusha" naFernando Aramburu kana tiine ruzivo.
"Mambo wemumvuri" yakapihwa naJavier Cercas kana tiine ruzivo.
«Zvese izvi ndichakupa» yakarohwa naDolores Redondo.
«Mashiripiti ekuva Sofia» kubva kuna Elísabet Benavent, watakave nemufaro wekubvunzurudza webhusaiti yedu uye ane mhinduro dzaunogona kuverenga pano.
"Semoto uri pachando" yakarohwa naLuz Gabás.
"Labyrinth yemweya" yakapihwa naCarlos Ruíz Zafón kana tiine ruzivo.
«Zvandichakuudza kana ndazokuona zvakare» yakarohwa naAlbert Espinosa.
"Katatu iwe" yakarohwa naFederico Moccia.
"Human Resources" naPierre Lemaitre kana tiine ruzivo.
"Hupenyu husingatauriki" naLuis Landero kana tiine ruzivo.
"Human Resources" naPierre Lemaitre uye "Hupenyu Husingatauriki" naLuis Landero
Ini pachangu, ndinonyatsoziva mazita ekutanga masere paMarch bestseller runyorwa asi kwete zvakanyanya ekupedzisira maviri: "Human Resources" uye "Negotiable Hupenyu" naPierre Lemaitre naLuis Landero zvichiteerana. Chii icho chimwe uye icho chiri nezve?
"Human Resources": Nhoroondo yekuparwa kwemhosva iyo yakaburitswa mu Edhisheni Alfaguara munaKurume 2. Iyo inoverengera yakazvimirira kubva kune yapfuura nemunyori uye ine huwandu hwese mazana mana nemakumi mana nemakumi mana emapeji. Iri rakaipa, bhuku chairo rinounza vaverengi padyo nenyika isina hunhu yebhizimusi nemusika wemasheya.
"Hupenyu husingatauriki": Mubhuku rino, Landero anotiunzira bhuku rinovava, rine kuseka uye kushomeka kwakashata ... Izvo zvakanyorwa mumunhu wekutanga uye iri razvino picaresque inoverengeka, uko protagonist inorondedzera hupenyu hwake hwekusiririsa uye husina musoro, umo kudonha nekusimuka ndicho chete chinhu chinomuponesa.
Ini pachangu, pamabhuku gumi anotengesa zvakanyanya emwedzi waMarch, ndinokurudzira maviri, nekuti iwo ndiwo andakaverenga uye akasiya kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo mangu: «Mashiripiti ekuva Sofia» y «Zvandichakuudza kana ndazokuona zvakare».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku anotengesa zvakanyanya muSpain mukati memwedzi waMarch
Mabhuku manomwe emweya yakasurukirwa
Iyo Commercial Café yakavhurwa zvakare. Madrid inodzoreredza imwe yenzvimbo dzayo dzekare dzekunyora